नायक पाल शाह अभिनित ‘लाउने भए लाऊ माया’ गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारनायक पाल शाह अभिनित ‘लाउने भए लाऊ माया’ गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 16, 2020 admin समाचार 7141
मोडल तथा क’लाकार पल शाह र कु’सुम गुरु’ङलाई फिचरिङ गरिएको गीत ‘ला’उने भए लाऊ माया’ बोलको गीत सा’र्वजनिक ग’रिएको छ प्रया’स रसाइली र मेलि’ना राईको स्वरमा सजि’एको उक्त गी’तमा तिल’क बस्नेतले शब्द तथा संगी’त सि’र्जना गरेका छन् ।
लोकशै’लीमा आधारित यो गीतको संयोजन कमल सौरागले गरेका हुन । भिडियोमा पल शाह र कुसुम गुरुङले कम्मर मर्काएका छन् । यस्तै गीतको भिडियोलाई रामकुमार केसीले छायांकन गरेका हुने् भने राजीव समरले कोरियाग्राफी गरेका हुन् । गीतको सम्पादन र निर्देशन टेकेन्द्र शाहले गरेका हुन् । भिडियाे हेरौं :
कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सुनेपछि बेहोस भएर संक्रमितको नि’धन
दिपक लिम्बु र डम्बर नेपाली एकसाथ मिडियामा, गाए एकअर्काको गीत (भिडियो सहित)
January 6, 2021 admin समाचार 4109
पहिलो नेपाली ताराका वि’जेता गायक दिपक लिम्बु र पपगायक डम्बर नेपालीले पहिलो’पल्ट एकसाथ अन्तरर्वाता दिएका छन् । डम्बरको संगी’तमा दुवैले गाएको गीत ‘यारकमा हौ सोल्टिनी’ बोलको गीत रिलिजका अवसरमा उनीहरु एकसाथ मि’डियामा आएका हुन् ।
August 16, 2020 admin समाचार 22710
March 20, 2021 admin समाचार 2449
सायद जिन्दगीमा यस्ता घ’टनाहरु कमै हुन्छन जहा“ बुढा परेका सासु ससुराको बस्ने बासनै उजा’डिदिएर बुहारी फ’रार भएका या भनौ भा’गेका घट’नाहरु । हो आज यस क’लियुग समाजको एउटा यस्तै लाजम’र्दो घट’नाको बारेमा जानकारी दिदैछौ तपाईलाई
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192269)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (185045)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161718)